နှစ်ကူး: August 2007
အကြိုက်ဆုံးပိုစ့် ၅ ခု
တက် ... တက်... တက် ...
တီဇက်အမ်ကြီး တက်လိုက်တော့ နှစ်ကူးတစ်ယောက် ရေးရပြန်ပီပေါ့...။ ( အရေးအသား အရမ်းကောင်းကောင်းနဲ့ ... အဟိ..အဟိ... )
အကြိုက်ဆုံးပိုစ့် ၅ ခုတဲ့.... အားလုံးကြိုက်နေတော့ ဘီလိုလုပ်မလဲ။ ရှိစုမဲ့စု ပိုစ့် လေးတွေထဲက ဖြစ်ညစ်ပီး ( အကြံဥာဏ် :P ) ရေးချလိုက်ပီ..... အပ်ချလောင်းးးးး
ပထမဆုံးနေ့ ( ဒါ ပန်းချီသင်တန်း ပထမဆုံးနေ့ ကတင်ဖြစ်တဲ့ပိုစ့် )
ဒါတွေသိလား ( မသိတေးရင် ၀င်ကြည့်ကြည့်ပေါ့ :P )
မှတ်သားလောက်ပါပေတယ် ( ဒေါ်ပြားအကြောင်း )
ကျောက်နဂါးသို့တစ်ခေါက် ( နှစ်ကူးရောက်ခဲ့တဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းနေရာကလေး )
ကလေးပန်းချီပြပွဲ ( အနာဂတ်ရဲ့ ပန်းချီဆရာ/မ များ =P )
ကဲ... နောက်ထပ် .. ဒူကို ပြန်တက်ရမလဲ... လာလေ...လေ့... ရော့
ahmei ( စိုးကြည် )
piyo piyo ( တစ်ခုတည်းသော ပိုစ့်ပိုင်ရှင်.. ဟိ..ဟိ..)
Posted by နှစ်ကူး at 8/28/2007 12:55:00 AM0comments
နှစ်ကူး Blog လေးကို လာလည်ကြတဲ့ နီးနီးဝေးဝေးမှ တူနယ်ဂျင်းလေးတွေ အားလုံးကို အရမ်းကျေးဇူးတင်တယ်။ မ၀င်ဖြစ်တာကြာပီ ဖြစ်တဲ့ blog လေးကို ၀င်ဝင်ချင်း Cbox က အသံလေးတွေကြောင့် အမောပြေသွားတယ်။ နှစ်ကူး Blog အတွက် Post တွေကိုတော့ ခဏတော့ နားထားအုံးမယ်။ ပုံဆွဲတာရော၊ စာကြည့်တာရော တော်တော်ပေါ့ နေလို့ ( ဆားလည်းခပ်လို့ မနိုင်ဖူးးးး =P )
အော်.....နောက်ပီး ငြုပ်သီး ကျွေးပီး Tag ထားတဲ့ ဗျို့ တူနယ်ဂျင်း TZM ရေ... ရေးပေးမယ်နော်။ "လာမည်.. ကြာမည်.." စိတ်မဆိုးနက်။ စိတ်ဆိုးရင် ဖတ်တီးပုတ်ရီးနက် ရတတ်တယ် ဟိ...ဟိ.. ။
Posted by နှစ်ကူး at 8/25/2007 10:31:00 AM4comments
ဒီနေ့တော့ ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက် ဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတွေကို post တင်လိုက်တယ်။ ဒီပုံလေးက အိမ်မှာဆွဲဖို့ ဆရာက အိမ်စာပေးလိုက်တော့ ဘာပုံဆွဲရမလဲ တော်တော်ကြီး စဉ်းစားရဒယ်။ ( ဟ … ဟ… လွယ်ဒါလေးတွေ လိုက်ရှာတာ) ဟိုပစ္စည်းလေးနဲ့ ပုံစံချကြည့် ၊ ဒီပစ္စည်းလေးနဲ့ ပုံစံချကြည့် အမျိုးမျိုးရွေးနေပီး နောက်ဆုံးတော့ ဒီဖိနပ်လေးကို ဆွဲဖြစ်လိုက်တာပါ။ သူများတွေ Drawing ကောက် ( ပုံကြမ်းချ ) တာ အချိန်သိပ်မကြာဖူး။ နှစ်ကူးကတော့ အနည်းဆုံး ၁ နာရီပဲ။ ပုံ ၃ ပုံမှာ ရှေ့ဆုံးကပုံ ပုံကြမ်းချထားတာကို ကြည့်လိုက်ရင်ပဲ သိသာပါတယ်..။ ပြင်လို့ကို မပီးနိုင်ဖူး။ နောက်တစ်ဆင့် အလယ်ကပုံလေးကတော့ ဖိနပ်လေးရဲ့ Texture ပေါ်အောင်လို့ ခဲချက် ( ရေးချက် ) တွေကို အမျိုးမျိုးပြောင်းရေးလိုက်တယ်..။ ရေးချက်တွေဆိုတာ အရင်ကပြောခဲ့သလို ထောင်လိုက်၊ လှဲလိုက် နဲ့ အနိမ့် အမြင့်တွေ၊ အနီးအဝေး တွေပေါ်အောင် ထည့်ပေးရတာ။ ( သိပီးသားတွေလဲ ဖြစ်မှာပါ =P ) အလင်းအမှောင် Tone တွေကို ခွဲလိုက်တယ်။ အဲ… နောက်ဆုံးပုံကတော့ Tone ပြည့်အောင် ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် အကုန်လိုက်ဖြည့်တယ်။ ဒီထက်လဲထက်ပီး ဖြည့်လို့ မရတော့လို့ ပီးပီဆိုပီး လက်စသတ်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် သင်တန်းကိုရောက်တော့ ဆရာက အဲ့ဒီပုံလေးကို Tone ပြည့်အောင်ထပ်ဖြည့်လို့ ပြောတယ်။ ဆွဲထားတဲ့ ပုံကိုကြည့်ပီး ဘာဆက်လုပ်ရမှန်း မသိဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီမှာ ဆရာကပြောတယ် “ မတူတဲ့ ရေးချက်လေးတွေနဲ့ ကွန်တိုလိုင်းလေးတွေ ထပ်ဖြည့် ရောသင့်တဲ့ နေရာတွေမှာ ရောပလိုက် ၊ အမှောင်ထဲက အလင်းလေးတွေ ရှာပီးဖြည့်၊ ရေးချက်တွေတူနေရင် ဖြည့်စရာ Tone ကုန်ပီးတော့ ချော်ကီ (ခဲကျွမ်း) သွားတတ်တယ်။ ” တဲ့ နောက်ခံ Background က ရေးချက်တွေက နည်းနည်းကြမ်းနေသေးလို့ ပြန်ဖြည်လိုက်ရတယ်။ ဒါတွေကတော့ နှစ်ကူး ဆွဲခဲ့တဲ့ ဖိနပ်ပုံလေးကို ဆရာပေးတဲ့ မှတ်ချက်တွေပါ။ ဒီဘေးကပုံလေးကတော့ ပြန်ပြင်ထားတဲ့ ပုံလေးပါ။
နောက်တစ်ပုံကတော့ “ ကျောင်းသွားဖော် ” လို့ နှစ်ကူး နံမည်ပေးထားတဲ့ ခဲခြစ်ပန်းချီလေးပါ။ ဒါလဲပဲ အိမ်မှာကိုယ်ဆွဲချင်ရာ ဆွဲလိုက်တာပါ။ ဒီပုံကိုပြလိုကတော့ ဆရာက သဘောကျသွားတာ။ လွယ်အိတ် အသားကိုပေါ်အောင်ဆွဲနိုင်လို့တဲ့…. ( ဟိ..ဟိ.. ) ။ ရေဗူးဆွဲထားတာကိုတော့ နည်းနည်းပြန်ပြင်ရဒယ်…။ ထုံးစံအတိုင်း ကွန်တိုလေး ထပ်ဖြည့်တာ။ ရေဗူးမှာ ကွန်တိုထပ်ဖြည့်ပေးတာကို Before နဲ့ After ဆိုပီး တွဲလျက်ပြပေးလိုက်တယ်။ ယှဉ်ကြည့်ကြည့်နော်။
ဒီ ၀က်ဝံရုပ်ကလေးကို ဆွဲရင်းနဲ့ အမွှေးပွကို ဆက်မဆွဲတတ်တော့လို့ ဒီအတိုင်း ရပ်ထားလိုက်တာ။ အမွှေးပွပွကို Study များများလုပ်ဖို့တော့လိုနေပီ။
ဒီပုံကတော့ ပန်းပွင့်ပုံစဆွဲခြင်းပဲ..။ အရင်က… သစ်ပင်တွေ ဆွဲရင်တော်တော်စိတ်ညစ်တာ။ ဟော..လာပါပီ .. သင်တန်းကိုရောက်တော့ ပန်းအိုးထဲမှာ ပန်းတွေနဲ့လဲတွေလိုက်ရော… ပန်းတွေစဆွဲရတော့မယ် ဆိုတာ သိလိုက်တယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ရှုထောင့်ကို စိတ်ကြိုက်ရွေးပီး ထိုင်ဆွဲကြရတယ်။ သူများတွေတော့ ဘယ်လိုအတွေးနဲ့ နေရာရွေးလဲမသိ..။ အဲဒီတုံးကတော့ နှစ်ကူးတစ်ယောက် လွယ်မယ်ထင်တဲ့ဘက်ကို ရွေးပလိုက်တာ။ ဆွဲထားတာ လုံးဝကို မလှဖူးးနော်….။
နောက်တစ်ရက် သင်တန်းရောက်တော့လဲ နှင်းဆီပန်း Study လုပ်ရပြန်တယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ မဆွဲတတ်ဖူးး ဆိုတဲ့စိတ်ကို မရမကဖျောက် ၊ ဆွဲကိုဆွဲရမှဖြစ်မယ်လို့ စိတ်သွင်း ( ရုပ်ရှင် ထဲကလိုဆိုရင် Key သွင်း တာပေါ့ :P ) ပီး drawing အရင်ကောက်တယ်။ အဲဒီ ပန်းတွေမှာ အလင်းဆုံး ဆိုတဲ့နေရာကိုရှာလိုက်တယ်။ အဖြူဆုံးကိုချန်ထားပီး half tone ကိုရှာပီးဆွဲတယ်။ အမှောင်ဆုံးနေရာတွေကို နောက်ဆုံးမှ အပီကိုခြယ်ပလိုက်တာ။ အဲလို..အဲလို.. Drawing ကောက် ထားတဲ့ ထဲမှာ Tone လေးတွေကို ဖြည်းဖြည်းချင်း လိုက်ထဲ့လိုက်တော့ ရုပ်လုံးနည်းနည်းပေါ်လာတယ်။ ဆွဲရတာ အားတက်သွားတာပေါ့။ အချိန်ကုန်လို့ ကုန်သွားမှန်းမသိရဖူး။ စိတ်မပါတဲ့ အချိန်ကဆိုရင် ဆွဲရတာ မပီးနိုင်သလို၊ အချိန်ကလဲ ကုန်ခဲသလိုပဲ။ ( အဲလို အပျင်းစား ရောဂါရှိတယ် ^_*) ။ “ အယ် .. ဒီခဲခြစ်ပန်းပုံလေးက လှတွားတယ်နော် တိုးတက်လာပီ ” လို့ ချီးကျူးမစောနဲ့အုံး… ။ နှစ်ကူးဆွဲတဲ့ပုံက အားနည်းနည်းပျော့တယ် ( Tone မပြည့်သေးလို့ ) ။ Teacher က ရောရမယ့်နေရာလေးတွေကို ရောပလိုက်တယ်။ နှစ်ကူး စစဆွဲထားတုန်းက ပန်းအိုးကို Line တွေနဲ့ ဆွဲထားတာလေ။ ဆရာက အဲဒီ Line ကို Tone ပြန်ပြောင်းလိုက်တယ် ( အလင်းအမှောင်နဲ့ ခွဲလိုက်တာ ) ။ Line နဲ့ ဆွဲထားတယ် ဆိုတာကို လွယ်လွယ်ပြောရရင် မိန်းကလေးတွေ နှုတ်ခမ်းနီ ဆိုးတဲ့အခါ ဘောင်ကွပ်ထား သလိုမျိုးပေါ့။ ပန်းပုံတွေ ကောင်းကောင်းမဆွဲတတ် သေးဖူးလို့ ဆရာကိုပြောတာ့ “အစပိုင်းမှာတော့ တွေ့ရာအားလုံးကို Line တွေ Curve တွေ အဖြစ်နဲ့မြင်ပီး ဆွဲခဲ့တဲ့ စိတ်ကိုဖျောက်။ အခု တစ်ဆင့်တက်မယ်။ Tone အနု အရင့် နဲ့ ခွဲခြားပီး မြင်တတ်အောင် ကြည့်ရတော့မယ် ” တဲ့။
မှောင်တဲ့ နေရာမှာလဲ အားလုံးက တပြေးထဲ မည်းမှောင်နေတာ မဟုတ်သလို၊ နေရောင်တိုက်ရိုက် ကျနေတဲ့ လမ်းမကြီးဟာလဲ ဖြူဖွေးမနေပါဖူးးး ။ အလင်းထဲမှာ အမှောင် Tone လေးတွေရှိသလို အမှောင်ထုထဲမှာလည်း အလင်း Tone လေးတွေရှိတယ်တဲ့။ ဒါတွေဟာ ရှာဖွေလေ တွေ့ရှိလေပါပဲ။ မတူညီတဲ့ Tone များများပါလေလေ… Fine Tone ရလေလေပဲ။ “ ခဲ ” အပြင် “ အရောင် ” တွေကိုသုံးပီး ကစားတဲ့ အခါမှာလည်း ဒီသဘောတရားတွေ ပါတယ် လို့ ဆရာပြောဖူးတယ်။
ကဲ … နောက်တစ်ပုံ..။ လောလောဆယ်တော့ နောက်ဆုံးဆွဲထားတဲ့ပုံပါ။ ဒီပုံကတော့ ပြင်ချင်စိတ်မရှိတော့လို့ကို လက်ကိုလွှတ်ထားတာ။ ကားဖွဲ့စည်းထားပုံလဲ ကိုလဲကြည့်ပါအုံး… ကိုယ်ကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင် မဆွဲနိုင်ဘဲနဲ့ ဆွဲရမယ့် ဧရိယာကို ပိုယူထားသလိုဖြစ်နေဒယ်။ မှားနေဒယ်လို့ ပြောရမှာပေါ့။ လှဘူးးနော်.. :( ။
နောက်ခါ အဲ့လို ဖြစ်စေရဖူးးး… စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ ပုံကောင်းကောင်းလေးတွေ ထပ်ဆွဲထားအုံးမယ်။ နှစ်ကူးဆွဲထားတဲ့ပုံလေးတွေ လာလာကြည့်ကြတဲ့ သူတွေအားလုံး အရမ်းပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
နှစ်ကူးရဲ့ ခဲခြစ်ပန်းချီလေး ဒီမှာပဲ နားအုံးမည်။
Posted by နှစ်ကူး at 8/01/2007 03:10:00 PM3comments